Avy ao Kiobà, nampiasàna VPN · Global Voices teny Malagasy
WhatsApp, Telegram, Signal: Voaporofo fa sakanan'i Kiobà nohon'ny fisianà hetsipanoherana
MpanoratraPeriodismo de Barrio
Nandika (en) i Anthony Sutterman
Voadika ny 17 Jolay 2021 5:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Dansk, Nederlands, Esperanto , Français, English, Español
Mpanao hetsipanoherana tao Havana, Kiobà, 11 Jolay 2021, Sary: Periodismo de Barrio.
Geisy Guia Delis no nanoratra voalohany ity tantara ity ho an'ny fampahalalam-baovao kiobàna Periodismo de Barrio ary navoakan'ny Global Voices.
Ny Alahady 11 Jolay, tamin'ny 11 ora antoandro aho no afaka nahita ny lahatsary voalohany tao amin'ny Twitter: vondrona iray nisy olona 20 nively vilany nandritra ny fahatapahan-jiro tao anatin'ny alina, tany amin'ny toerana iray toa tao Holguín. Naharitra 10 segondra teo monja ilay lahatsary, saingy naveriko nalefa im-betsaka. Fotoana fohy taorian'izay, niparitaka be tao amin'ny Facebook ny fandefasana nivantana momba ireo olona an-jatony maro teny an'arabe tao San Antonio de los Baños, faritanin'i Artemisa. Tena nanaitra tokoa no sady tsy azo ninoana ireo hiaka miantso “Fahafahana!”, “Tsy matahotra izahay!” sy ny “Poteho ny jadona!”. Nila naka fotoana kely aho mba handreseko lahatra ny tenako hoe tena zavamisy tokoa izao rehetra izao.
Ny 11 Jolay, an'arivony maro iroe Kiobàna nanerana ilay nosy no nanatevina laharana ny hetsipanoherana goavana indrindra tato anatin'ny taompolo maro ho fanoherana ny governemanta kaominista ao Kiobà, ary olona am-polony maro no voasambotra nandritra izany. Toherin'izy ireo ny tsy fahampian'ny sakafo sy fanafody noho ny fiatrehan'ny firenena olana ara-toekarena henjana dia henjana vao mainka nohamafisin'ny fisian'ny valanaretina COVID-19 sy ny fahirano ataon'i Etazonia.
Tonga saina tamin'ny zavatra mitranga aho ary avy hatrany dia nihevitra fa, afaka minitra vitsy, mety ho tapaka ny tolotra aterineto eto Kiobà, na raha kely indrindra dia ny ao San Antonio de los Baños. Làlan-tsaina mandeha ho azy izany amin'izao fotoana izao. Fantatry ny tsirairay ao amin'ilay nosy ny hoe inona no arofenitra arahana satria efa nahazo lesona izahay tamin'ny 26 Novambra 2020, fony notapahan‘ny Ministeran'ny Atitany sy ilay hany mpanome tolotra telefaona ao Kiobà ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, ka nahafahan'ireo mpiasam-panjakana, nampitafiana toy ny mpitsabo, niditra an-tsokosoko tao Damas 955, trano fonenan'ilay Kiobàna artista Luis Manuel Otero Alcántara no sady foiben-toeran'ny hetsika San Isidro.
Mety hahaliana anao koa: Iza moa ny artista Luis Manuel Otero, endrika amantarana ny fanoherana no sady tsilo ao an-tongotry ny fitondràna kiobàna? (amin'ny fiteny anglisy)
Elaela ihany ilay lahatsary momba ireo hetsipanoherana tao San Antonio de los Baños no tavela tety anaty aterineto ka hitan'ireo faritany rehetra nanerana ny firenena. Vantany niparitaka tany Palma Soriano, Santiago de Cuba, ny “vanja” dia nanomboka ireo tatitra momba ny fisian'ny olana ho an'ny WhatsApp, Facebook ary Telegram. Ny sasany tamin'ireo mpampiasa Twitter koa nanomboka nitoroka ny tsy fahalavorarian'ny tolotra. Marobe ireo olona, izay afaka nijanona elaela tety anaty tambajotra tamin'ny alàlan'ny VPN, no nahavita nampakatra saripika ahitàna an'i Malecon, San Rafael Boulevard, Bauta ary Güines ao La Havane—ireo toerana tototra vahoaka nikiakiaka ny hoe “Tanindrazana sy fiainana!”
Mandeha ny siosion-dresaka any anaty fifanakalozandresaka sasany ifanaovan'ireo vondrona Kiobàna mpanoratra rindrambaiko sy mpandrafitra programa fa tsinjarain'ny ETECSA ho anaty “vala / toeram-piompiana” ireo mpampiasa azy, ka namoronany rafitra samihafa ho fitsinjarana sy fametrahana votoaty izy ireny. Ahafahana manandrana ireo fampiasa vaovao io, nefa koa ahafahan'ireo orinasa manakatona andiana tolotra. Io no afaka anazavana ny antony mahatonga, ohatra, ny VPN ho azon'ny mpampiasa sasany ampiasaina, nefa tsy mety ampiasain'ny hafa, na dia samy ao anaty trano iray aza no misy azy ireo.
Na nisy aza mpampiasa vitsivitsy afaka niditra aterineto avy any an-tranony tamin'ny alàlan'ny Nauta Hogar ary ny hafa tamin'ny alàlan'ny fampiasàna ireo toerana misy WiFi (hotspots), 48 ora taty aoriana dia tsy afaka niditra aterineto ny ankamaroan'ireo Kiobàna nampiasa data tamin'ny finday. Marobe ireo olona avy amin'ny sehatra tsy miankina no nandefa tatitra hoe zara raha afaka niasa ry zareo noho io fepetra io.
Ary raha miantso ny hotline ao amin'ny ETECSA ianao, dia hilaza aminao ry zareo hoe tapaka ny tolotra.
Tapaka ny fifandraisan'ireo olona nifamory sy nikarakara zavatra taty anaty tambajotra sôsialy. Ary aza nandra: izany indrindra no katsahan'ireo manampahefana mba hanajanonana ny fiparitahan'ireo hetsipanoherana. Kanefa, ny fameperana ny zo amin'ny aterineto dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahaverezan'ireo zo sivily hafa, indrindra fa hoe anaty fitondrana tsy refesimandidy.
Araka ny lazain'ny OpenObservatory, tranonkala iray manokan-tena hanaraka akaiky ny fanivànana ny aterineto, misy ny porofo fa sakanan'i Kiobà ny WhatsApp, Telegram ary Signal ho setrin'ireo hetsipanoherana. Tahaka izany koa, omaly tolakandro i DougMadory, talen'ny fandalinana ny aterineto ao amin'ny Kentikinic, nitatitra fa, noho ireo hetsika fanoherana ny governemanta ao Kiobà, tamin'ny 4:05 tolakandro, ora ao an-toerana dia tafidina hatrany amin'ny aotra ny data sy fivezivezena tanaty aterineto—mankao sy avy ao amin'ilay nosy.
Mety hahaliana anao koa: Kiobàna artista mampiasa ny hira, ny media sôsialy ary ny fitokonana tsy hisakafo mba hiadiana amin'ny famoretana (amin'ny fiteny anglisy)
Tanaty fandaharan'ny onjampeo iray, ilay Kiobàna mpanao gazety, Arleen Rodriguez Derivet, nanamafy ny fisiana rindrinafo ao amin'ny tambajotra sôsialy, izay heverina hibahanana ireo kabarim-pankahalàna.
Tamin'ny Jona 2011, nankatoavin'ny Firenena Mikambana ny Fanambaràna Niraisana momba ny Fahalalahana Maneho Hevitra sy ny Aterineto, ka tao anatin'izany dia niarahana nanaiky fa ireo fanjakàna dia tokony “hampiroborobo ny fahafahan'ny rehetra miditra amin'ny aterineto mba hampiroboroboana ny fanajàna ireo zo hafa, toy ny zo hahazo fanabeazana, fikarakaràna ara-pahasalamàna ary asa.”
Tsy misy hafa amin'izay, voamarika ao fa tsy misy antony na kely aza manamarina ny fampiatoana ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, na izany ho an'ny vahoaka manontolo, na ho ana ampahan'olona, na dia noho ny antony filaminam-bahoaka sy fiarovam-pirenena aza.
Nandritra ny fisehoany tamin'ny 12 Jolay, nanintsankintsana tao amin'ny fahitalavi-panjakana ny filoha Miguel Díaz-Canel namely ireo tambajotra sôsialy sy mpampahalala vaovao sasantsasany, tamin'ny fankianana azy ireny ho “mikarakara fanonganam-panjakana mangina” hanoherana ny Revôlisiôna.
Raha mitohy ny fitaterana fisiana hetsipanoherana avy any amin'ny faritra samihafa, ireo Kiobàna kosa miandry ny hiverenan'ny tolotra nandoavan-dry zareo vola avy tamin'ny karamany manokana, na naloan'ireo havany avy any ivelany. Amin'ireo andro izao, fotoana mahasarobidy ny tsiky iray ampitain'ny fàfana, safidy noraisin'ny governemanta kiobàna ny hitoka-monina bebe kokoa.
Tantaran'ny Kiobà farany
‘Ny vahoakako, avy aty ambony sy avy lavitra': Havana an-tsary
23 Aogositra 2021Amerika Latina
LIVE amin'ny 25 Aogositra (amin'ny teny espaniola): Ahoana ny nampielezan'ny COVID-19 ny hetsi-panoherana any Cuba, Guatemala ary Colombia
28 Jolay 2021Amerika Latina
2 herinandro izayOseania